Lukaku, Kane, Varane, Abraham, Kounde, Messi, Martinez & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Lukaku, Kane, Varane, Abraham, Kounde, Messi, Martinez & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee...
Lukaku, Kane, Varane, Abraham, Kounde, Messi, Martinez & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga – Banaadirsom
Waxa si Rasmi ah u dhamaaday xilli ciyaareedka 2020/2021 waxana ay kooxaha reer yurub bilaabayaan qorshaynta suuqa kala iibsiga iyo xiddigaha ay doonayaan in ay la soo saxiixdaan inta uu suuqu furanyahay si ay ugu xoojiyaan kooxohooda.
Kooxaha reer yurub iyo waliba xiddigaha ayaa bilaabaya indha-indhaynta xiddigo iyo kooxo cusub oo ay ka ciyaaraan xilli ciyaareedka dambe iyada oo kooxuhu haatan la saxiixan karaan xiddigaha ay doonayaan.
Inkasta oo uu suuqu furmi doono bilowga bisha dambe hadana kooxaha ayaa dhamaystiri kara saxiixyada xiddigaha ay doonayaan maadama uuna jirin horyaal furan oo ay xiddiguhu diirada saari doonaan.
Hadaba waxa aan maalin walba si joogto ah idiinku soo bandhigi doonaa wararka xiddigaha iyo kooxaha kala duwan ee suuqa kala iibsiga.
Xiddiga Romelu Lukaku ayaa qarka u saaran in uu dhamaystiro ku biiristiisa chelsea kadib markii uu shalay u soo duulay London si uu u dhamaystiro ku biiristiisa (Sky Sports).
Banaadirsom Tottenham ayaa u dhaqaaqi doonta saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara Banaadirsom Fiorentina ee Dusan Vlahovic hadii ay iska iibiyaan xiddiga Harry Kane (Gazzetta dello Sport).
Banaadirsom Man City ayaa wadahadalo cusb la furtay Banaadirsom Tottenham si ay uga hesho saxiixa xiddiga xilli uu xiddigu ku soo laabtay tababarka kooxdiisa (MailOnline).
Banaadirsom Arsenal ayaa si Rasmi ah uga Hadhay baacsigii ay ugu jirtay saxiixa Goolhayaha Aaron Ramsdale kadib markii ay Sheffield United kala heshiin wayday qiimaha (Football. London).
Banaadirsom Man United ayaa maanta ku dhawaaqi doonta saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara ee Raphael Varane (Sun).
Banaadirsom Chelsea ayaa aqbashay dalabka ay Banaadirsom Roma ku doonaysay saxiixa xiddiga Tammy Abraham kiyada oo Roma ku dartay heshiiskiisa lacag ay dib ula wareegi karto xiddiga hadii ay u baahato (Goal).
Taababaraha Banaadirsom Roma ee Jose Mourinho ayaa la xidhiidhay xiddiga Abraham si uu xiddiga ugu qanciyo in uu ku biiro kooxdiisa (Mirror).
Si kasta ha ahaatee Banaadirsom Arsenal ayaa Roma u soo bandhigtay saxiixa xiddiga Alexandre Lacazette si ay ugu fududaato saxiixa xiddiga Tammy Abraham oo uu Mikel Arteta doonayo (Calciomercato).
Banaadirsom Sevilla ayaa diyaar u ah in ay Chelsea ka iibiso saxiixa xiddiga Jules Kound laakiin Chelsea ayaa diidan in ay bixiso lacagta 68-ka milyan ee ay Sevilla doonayso (Evening Standard).
Banaadirsom Lyon ayaa ku dhaw in ay Liverpool kala heshiiso saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara Reds ee Xherdan Shaqiri (Sky Sports).
Xiddiga Cusub ee Banaadirsom PSG ee Lionel Messi ayaa lacag dhan €39m ku leh Banaadirsom Barcelona oo uu ka tagay (El Espanol).
Banaadirsom Roma ayaa doonaysay in ay dalab 50 milyan ah ka gudbiso saxiixa xiddiga Anthony Martial ka hor intii ayna Man United diidin in ay iibiso xiddiga (Mail).
Qolka Labiska Banaadirsom Barcelona ayaa si weyn u xanaaqay kadib bixitaankii Lionel Messi gaar ahaan xiddiga Philippe Coutinho (Sun).
Arsenal ayaa xiddiga Lautaro Martinez u balan qaaday mushahar todobaadkii dhan 275 kun oo Gini hadii uu ku soo biiro Emirates (Sun).
Xiddiga Banaadirsom chelsea ee Antonio Rudiger ayaa doonaya in uu xagaaga dambe qaab xor ah ugu biiro midkood kooxaha Real Madrid ama PSG (Mail).
Banaadirsom Arsenal ayaa kali ku noqotay baacsiga xiddiga khadka dhexe ee Banaadirsom Bayern Munich ee Corentin Tolisso kadib markii ay Man United ka hadhay waxana lagu heli karaa kaliya 8 milyan oo euro (Express).
Sii Akhriso: Ma Jiraa Qof Aad Jeceshahay Laakiin Aad Khalad Ka Gashay, Ma Doonysaa In Ay Ku Cafiso Ama Uu Ku Cafiyo, Fariintan Cajiibka Ah Ayaa Kaaga Filan
Previous articleSababta Ayna Man United Wali Ugu Dhawaaqin Saxiixa Raphael Varane Oo La Ogaaday, Dhibaato Miyaa Jirta? – Banaadirsom
Next article5-ta Saxiix Ee Ay Arsenal Ku Fashilantay Suuqa Xagaagan Oo La Soo Saaray. – Banaadirsom